Sun, Jul 12, 2020 at 5:30pm
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिए लोकसभा सदस्यको सपथ
नयाँदिल्ली, २ असार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तल्लो सदन लोकसभाको सदस्यका रुपमा सोमबार सपथ लिनुभएको छ । उहाँ उत्तर प्रदेशको वाराणसी क्षेत्रबाट लोकसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । सोमबार नै अस्थायी सभामुख चुनिनु भएका विरेन्द्र कुमारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई संसद सदस्यको सपथ गराउनुभएको थियो । भारतीय लोकसभाको १७औं बैठक सोमबार नै शुरु भएको हो । संविधान अनुसार संसदीय दलको नेताको रुपमा मोदीले पहिलो सांसदको..
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई जन्मदिनको अवशरमा पुटिनले दिए 'सप्राईज' !
काठमाडौँ, १ असार चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले शनिबार आफ्नो ६६ औँ जन्मदिन मनाएका छन्। यही मौकामा रूसका राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुटिनले जिनपिंगलाई आइसक्रिम बक्स गिफ्ट गरेका छन्। पुटिनले भनेका छन्, ‘जन्मदिवसको बधाइ, मेरो शुभकामना तपाईंको साथमा छ। तपाईं जस्तो मित्र पाउँदा म अत्यान्तै खुसी छु।’ सो कार्यक्रम हुँदा दुवै नेता ताजिकिस्तानमा आयोजित कन्फ्रेन्स अन इन्टरेक्शन एन्ड कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स इन एशिया (सिआइसिए) को..
भारतले अमेरिकी सामानमा कर बढायो, १ सय २० प्रतिशतसम्म वृद्धि
नयाँदिल्ली, १ असार । भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरेको जनाएको छ । अमेरिकाले भारतलाई दिइआएको व्यापार सुविधा कटौती गरेको बदलामा उक्त कदम चालेको भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भारतीय केन्द्रीय राजश्व तथा भन्सार बोर्डका अनुसार अमेरिकाबाट आयात हुने बदाम, स्याउ र ओखर समेतका सामानमा करवृद्धि गरिएको छ । भारत र अमेरिकाबीच पछिल्लो समय आपसी सम्बन्ध निकै प्रगाढ रहेको भनिए पनि दुबै..
न्यूजील्यान्डको ला–इस्पारेन्स रकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६.६ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
हङकङ, १ असार । न्यूजील्यान्डको ला–इस्पारेन्स रकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आइतबार बिहान ६.६ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भौगर्भिक सर्भेका अनुसार उक्त भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब १११ किलोमिटर गहिराईमा गएको थियो । भूकम्पबाट सो स्थानमा कुनै क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छैन ।..
काठमाडौं, ३२ जेठ । विश्वकै महत्वपूर्ण तेल मार्गका रुपमा चिनिएकोओमान सागरमा एक साताभित्र चारवटा तेल ट्याङ्करमा शंकास्पद आक्रमण भएका छन् । अरब सागर र स्ट्रेट अफ हर्मुजको ओमानी जलक्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्ने मालबाहक पानीजहाजमाथि निरन्तर भएका आक्रमणले इरानमाथि चौतर्फी आशंका उब्जाएका छन् । पछिल्ला यी आक्रमणहरु खासगरी साउदी अरेबिया, नर्वे र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) का राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तेल ट्याङ्करमा भएका छन्..
केन्याको ८ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत
नैरोबी, ३१ जेठ केन्याको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा करिब ६.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार यो वृद्धि सन् २०१८ कै हाराहारी हो । केन्याका अर्थमन्त्री हेनरी रोटिचले विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिदृश्यमा समेत केन्याको आर्थिक वृद्धि स्थिर रहनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०१८ कै हाराहारीमा सन् २०१९ को आर्थिक वृद्धि हुनु निकै राम्रो हो भन्नुभयो । केन्यामा..
गल्फ अफ ओमानमा तेल ट्याङ्कर विस्फोट: हमला भएको अनुमान
काठमाडौँ, ३० जेठ गल्फ अफ ओमानमा भएको एउटा शङ्कास्पद हमलामा दुईवटा ट्याङ्करमा क्षति पुगेको छ। ती ट्याङ्करहरू विश्वकै व्यस्त तेल निर्यात मार्गमध्येको एउटा मार्गनजिकै थिए। दुईमध्ये एक ट्याङ्करका सञ्चालकले त्यहाँ विस्फोटन भएको र आग्लागी भएको बताएका छन्। ती दुवै ट्याङ्करका टोलीलाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको छ। आशङ्का गत मेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त क्षेत्रमा तनाव चुलिएको छ। अमेरिकीहरूले ती क्षेत्रमा इरानी..
एससीओ सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बिस्केकमा
नयाँ दिल्ली, ३० जेठ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कजाकिस्तानको राजधानी बिस्केक जानु भएको छ । उहाँ साङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ)को सम्मेलनमा भाग लिन त्यहाँ जानु भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी गत महिना मात्र दोस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको थियो । उहाँ एससिओ सम्मेलनमा पनि दोस्रो पटक भाग लिन लाग्नुभएको हो । गत वर्ष चीनमा..
'हङकङ' हिंसात्मक बन्दै, प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली प्रहार !
काठमाडौं, जेठ २९ हङकङमा प्रस्तावित नयाँ सुपुर्दगी कानुनविरुद्धको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि रबरका गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । हङकङमा दशकौंयता पहिलोपटक प्रदर्शनकारीमाथि रबरको गोली प्रहार भएको हो । प्रस्तावित विधेयकमाथि छलफल हुनुअघिको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको हो । हङकङका नागरिकलाई चीन सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान भएको विधेयकको विरोधमा हजारौं मानिस सडकका उत्रिएका हुन् । उनीहरुले हङकङका..
अल्जेरिया र पोर्चुगलबीच १० वर्षे ग्यास खरिद सम्झौता
अल्जियर्स, २९ जेठ । अल्जेरिया र पोर्चुगलका दुई ग्यास उद्योगबीच आगामी दश वर्ष पोर्चुगललाई ग्यास बिक्री गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौतामा अल्जेरियाको सोनाट्राक र पोर्चुगलको गाल्पबीच मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार उत्तर अफ्रिकी मुलुक अल्जेरियाले आगामी १० वर्षसम्म पोर्चुगललाई वार्षिक २ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर प्राकृतिक ग्यास बिक्री गर्नेछ । अल्जेरिया र पोर्चुलबीच सन् १९९४ मा साझेदारी सम्झौता..
चीनको सञ्चित विदेशी मुद्रा ३१ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर, आर्थिक अवस्था स्थिर
बेइजिङ, २८ जेठ । चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चयको कुल ३१ खर्र्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको चीनको राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ब्यूरोले जनाएको छ । ब्यूरोद्वारा उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कमा भनिएको छ, “सन् २०१९को मेको अन्तसम्म चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चय ३१ खर्ब १ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो अप्रिल महिनाको अन्त्यसम्मको तुलनामा ६ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ०.२ प्रतिशतको वृद्धि..
नैरोबी, २८ जेठ । चीनले लामो खडेरीबाट सर्वाधिक प्रभाव परेको केन्याका लागि ११ हजार ८३५ टन चामल प्रदान गरेको चिनियाँ अधिकारीहरुले बताएका छन् । केन्याका लागि चिनियाँ राजदूत ऊ पेङले उक्त सहयोगको पहिलो खेप सुख्खा प्रभावित इलाकामा वितरण भइसकेको र बाँकी चामल पनि वितरणको क्रममा रहेको बताउनुभयो । राजदूत पेङले दोस्रो खेपका रुपमा अरु एक हजार ५०० टन चामल ढुवानीको कार्य भइरहेको जानकारी..
बेइजिङ, २७ जेठ । चिनियाँ नेटवर्कलाई लक्षित गरी हुने प्राय साइबर आक्रमण संयुक्त राज्य अमेरिकाका कारण हुने गरेको चीनको नेशनल कम्प्यूटर नेटवर्क इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टेक्निकल टिम (सीएनसीईआरटी) ले सोमबार सार्वजनिक एक बार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘ट्रोजन तथा वोटनेट’ गतिविधिका आधारमा सन् २०१८ मा चीनको मूख्य भू–भागमा रहेका ३३ लाख ४० हजार कम्प्यूटरमा करिब १४ हजार ट्रोजन वा बोटनेटका कमाण्ड तथा कन्ट्रोल..
चिनियाँ राष्ट्रपति सि र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच किर्गिस्तानमा भेटवार्ता हुँदै
बेइजिङ, २७ जेठ चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता हुँदै छ । यही जुन १२ का लागि उनीहरुबीच किर्गिस्तानको बिस्केकमा भेटवार्ता तय भएको हो । सांघाइ सहयोग संगठनको सहयोगमा हुने दुईदिने १९औं शिखर सम्मेलनको क्रममा उनीहरुबीच भेट्ने कार्यक्रम तय भएको हो । सम्मेलनको क्रममा आतंकवाद विरुद्ध सुरक्षा सहकार्य, आर्थिक सहकार्य लगायत विषयमा उनीहरुको वार्ता केन्द्रित हुने बताइएको छ ।..
चीनको हङ्‌कङमा स्वतन्त्रता यताकै ‘ठूलो प्रदर्शन’, सञ्चारमाध्यम भन्छन् - विदेशीको हात
काठमाडौँ, २७ जेठ । हङ्‌कङमा प्रहरी र प्रदर्नकारीहरूबीच हिंसात्मक झडप भएका छन् । सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा प्रस्तावित कानुनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा लाखौँ मानिस सहभागी भए । प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्त प्रस्तावित कानुनले चीनलाई हङ्‌कङस्थित आफ्ना राजनीतिक विपक्षीलाई निसाना बनाउन सहयोग पुर्‍याउने डर छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले हङ्‌कङको प्रदर्शनमा विदेशी शक्तिको हात रहेको आरोप लगाएका छन्। विदेशी शक्तिहरूले चीनलाई 'चोट पुर्‍याउन' हङ्‌कङमा विध्वंश निम्त्याउन खोजेको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले..
चीन-अमेरिका व्यापार युद्द : अमेरिका निर्यात हुने प्रविधिमा रोक लगाउँदै चीन
काठमाडौँ, २६ जेठ चीनले अमेरिका निर्यात हुने केही प्रविधिमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । चिनियाँ सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सका सम्पादकले शनिवार यस्तो बताएका हुन् । चिनियाँ दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेईमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको बदलामा चीनले आफ्ना प्रविधि अमेरिका निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी निकट पत्रिकाका सम्पादक हु सिचिनले चीनले आफ्ना प्रमुख प्रविधि बचाउन व्यवस्थापकीय..
ताइवानलाई २ अर्ब डलरको हतियार बेच्दै अमेरिका, चीन कडा विरोधमा !
काठमाडौं, २४ जेठ अमेरिकाले २ अर्ब डलर बराबरको हातहतियार र ट्यांक ताइवानलाई बेच्ने भएको छ । चिनियाँ विरोधका बावजुद अमेरिकाले ताइवानसँग हतियार सम्झौता भएको छ । अमेरिकाले पहिलो पटक आफ्नो आर्मीको उत्कृष्ट ट्यांक बेच्न लागेको हो । यस सम्झौताले चीनलाई भने झनै आक्रोशित बनाएको छ । अमेरिकी आर्मीको एम१ए२ अब्राम्स् ट्यांक खरिदबिक्री सम्झौता गर्न लागिएको छ । यस्तै, अमेरिकाबाट ताइवानले एन्टी एयर..
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा पार्टीबाट राजीनामा, जुलाईको अन्त्यसम्ममा अर्को प्रधानमन्त्री चयन हुने
लण्डन, २४ जेठ बेलायतका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले शुक्रबार सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री मेले जुन ७ मा कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिने यसअघि नै बताउनुभएको थियो । मेको ठाउँमा जुलाईको अन्त्यसम्ममा बेलायतमा अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन हुनेछ र यस दौडमा ११ जना रहेका छन् । युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरिने (ब्रेक्जीट) का बारेमा संसदमा प्रस्ताव..
सुडानमा १ सय ८ सर्वसाधारणको मृत्युपछि प्रदर्शनकारीद्वारा वार्ता अस्वीकार
खार्तुम, २३ जेठ । सुडानमा प्रदर्शनकारीका नेताहरुरुले सत्तारुढ सैनिक परिषदसँगको वार्तालाई अस्वीकार गरेको छ । सुडानको राजधानी खार्तुमस्थित जारी प्रदर्शनको क्रममा सरकारी सेनाको दमनमा १ सय ८ जनाको मृत्यु भएपछि नेताहरुले वार्तालाई अस्वीकार गरेका हुन् । बुधबारसम्मा सैनिक मुख्यालय बाहिर चलाएको गोली लागि मृत्यु हुनेको संख्या ६० जनाभन्दा बढी पुगेको चिकित्सकहरुले बताएका थिए । परिषद्ले सत्ता हस्तान्तरण सम्बन्धी नागरिक मोर्चासँग गरेको सम्झौता भङ्ग गरी..
ट्रम्प प्रशासनले लगायो अमेरिकी नागरिकलाई क्युबा भ्रमणमा प्रतिबन्ध
वासिङ्टन, २२ जेठ ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी नागरिकलाई क्युबा भ्रमणमा मङ्गलबार प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी अर्थ विभागले अमेरिकी नागरिकको शैक्षिक भ्रमण, क्रुज पानीजहाज र निजी डुङ्गाबाट हुने क्युबा भ्रमण रोक्का गरिएको जनाएको छ । अमेरिकी यस प्रतिबन्धबाट क्युबाको अर्थतन्त्रमा निकै असर पार्ने अनुमान गरिएको छ किनभने सन् २०१९ को चार महिनामै करिब तीन लाख अमेरिकीले क्युबाको भ्रमण गरेका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा..
सुडान सङ्कट : आम निर्वाचनको घोषणा, सेनाको गोली लागि ३५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु
खार्तुम, २१ जेठ सुडानको सत्तारुढ सैनिक परिषदले प्रदर्शनकारीसँग यसअघि भएको सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी सम्झौता भङ्ग गरी नौ महिनाभित्र आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । सुडानको राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालय बाहिर सेनाले चलाएको गोली लागि ३५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको भोलिपल्टै सेनाले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । सुडानको सेनाप्रमुख अब्देल फताह अल–बुरहानले टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा निर्वाचन गराइने..
नयाँ दिल्ली, २० जेठ । भारतको राजधानी शहरमा झण्डै दश लाख महिलालाई सार्वजनिक यातायात सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने भएको नयाँ दिल्लीको सरकारले सोमबार जानकारी गराएको छ । नयाँ दिल्लीमा सन् २०१२ मा एउटा निजी बसमा विद्यालयबाट घर फर्किरहेका समय एक छात्रामाथि सामूहिक वलात्कारपछि हत्या गरिएपछि यसलाई महिलाको सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित भएको महशुस गरिँदै आएको थियो । सन् २०१२ को उक्त घटनालाई लिएर..
१० वर्षपछि ब्रिटिस एयरवेज पाकिस्तान फर्कियो, सोमबारदेखि उडान शुरु
इस्लामाबाद, २० जेठ १० वर्षभन्दा पहिले सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेका कारण उडान स्थगित गरेको ब्रिटिस एयरवेजले सोमबारदेखि पाकिस्तान उडान शुरु गरेको छ । बेलायती वायुसेवाको उक्त उडान पाकिस्तानका लागि निकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ । इस्लामाबादको म्यारिअट होटलमा घातक आक्रमण भएपछि ब्रिटिस एयरवेजले सन् २००८ देखि उडान स्थगित गरेको थियो । अब ब्रिटिस एयरवेजले लन्डनको हिथ्रो विमानस्थलबाट पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद सिधा..
बमको हल्लापछि यात्रुवाहक विमान सिङ्गापुर वायुसेनाका लडाकु जेटले सकुशल ओराले
काठमाडौँ, २० जेठ । उडिरहेको एउटा यात्रुवाहक विमानमा बम भएको हल्ला चलेपछि सिङ्गापुर वायुसेनाले दुईवटा लडाकु जेट विमान पठाएर सो विमानलाई सकुशल अवतरण गराएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अवतरणपछि विमानमा कुनै विस्फोटक पदार्थ भेटिएन र प्रहरीलाई दिइएको सूचना मिथ्या भएको पुष्टि भयो। फिलिपिन्सको सेबुबाट आइतवार उडेको स्कूट वायुसेवाको विमानमा १४४ यात्रु र चालकदलका छ सदस्य थिए। नाम नखुलाइएका एक १३ वर्षीय किशोरले सो हल्ला चलाएको स्थानीय..
अन्ततः अमेरिका घुँडा टेक्न बाध्य, शर्तविनै इरानसँग कुराकानी गर्न तयार
एजेन्सी, १९ जेठ इरानसँग ‘कुनै पूर्वशर्त विना कुराकानी गर्न’ अमेरिका तयार रहेको आइतबार अमेरिकाले बताएको छ । अमेरिकाले इरानका ‘गलत गतिविधि’लाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्ने कुरामा पनि इरानका अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले जोड दिए । अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले स्वीट्जरल्याण्डका विदेश मन्त्री इग्नाजिओ कासिससँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामी ‘कुनै पूर्व शर्तविना’ इरानसँग कुराकानी गर्न तयार छौँ । उनीहरूसँग बसेर छलफल गर्न चाहन्छौँ..
मन्त्रिपरिषदमा ५० प्रतिशत महिला राखेर दक्षिण अफ्रिकाले रच्यो इतिहास
प्रिटोरिया, १८ जेठ दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले आफ्नो नयाँ मन्त्रिपरिषद घोषणा गरेका छन् । उनको मन्त्रिपरिषदमा देशको इतिहासमै पहिलो पटक ५० प्रतिशत महिलालाई सामेल गराइएको छ । मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराइएकी एक महिला विपक्षी पार्टीकी समेत रहेकी छन् । जो आफैंमा अनौठो निर्णय हो । रामाफोसाले विपक्षी पार्टीकी अनुभवी नेतृ पेट्रिसिया डे लिलीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराएका हुन् । केपटाउनकी पूर्व मेयर समेत..
चीन–अमेरिका ब्यापार विवाद : चीनद्वारा केही विदेशी कम्पनीलाई कालो सूचीमा
बेइजिङ, १७ जेठ चीन–अमेरिका व्यापार विवाद समाधानको सङ्केत आउने अपेक्षा विश्व समुदाय र सम्बन्धित देशका व्यवसायीलेसमेत गरिरहेका समय विवाद थप चर्किने सङ्केत देखापरेको छ । अमेरिकाले चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेलाई लक्षित गर्दै विवादलाई बढाएको र अमेरिकाले चीन निर्यात हुने थप सामानमा करवृद्धि गर्ने निर्णयसँगै चीनले ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सामानमाथि थप कर वृद्धि गर्ने यस पहिले नै गरेको छ ।..
गैरकानुनी आप्रवासन रोक्न मेक्सिकोका सामानमाथि कर लगाउने अमेरिकाको घोषणा
काठमाडौँ १७ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी आप्रवासन रोक्न मेक्सिकोबाट आउने सबै सामानमा कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । एउटा ट्विटमा ट्रम्पले जुन १० तारिखदेखि मेक्सिकोबाट अमेरिका आउने सामानहरूमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने र त्यो 'गैरकानुनी आप्रवासनको समस्या निराकरण नभएसम्म' बिस्तारै बढ्दै जाने बताएका छन्। ट्रम्पले दक्षिणी सीमामा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेका छन् । सीमा अधिकारीहरूले सो कदमको स्वागत..
अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीद्वारा स्कट मरिसनले पुनः प्रधानमन्त्री पदको सपथ
क्यानबेरा, १५ जेठ अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले पुनः प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिनुभएको छ । मरिसनको मन्त्रिमण्डलमा पहिलोपटक सात जना महिलाको सहभागिता रहेको छ । मरिसनले बुधबार बिहान गभर्नर जनरल पिटर कोसग्रोभ समक्ष सपथ लिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री मरिसनको नेतृत्वमा रहेको नेसनल पार्टी कोएलिसन (एलएनपी) गत मे १८ मा भएको आम निर्वाचनमा विजयी भएको थियो । एलएनपीको यो लगातार तेस्रो जित हो । विपक्षी अष्ट्रेलियन..
जापानका नयाँ सम्राट नारुहितोलाई भेट्ने ट्रम्प पहिलो विदेशी नेता
टोकियो, १३ जेठ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जापानका नयाँ सम्राट नारुहितोलाई भेट्ने पहिलो विदेशी नेता बन्नु भएको छ । नारुहितो र ट्रम्पबीच टोकियो दरबारमा सोमबार भेटवार्ता भएको जापानी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यसअवसरमा जापानी सेनाले ट्रम्पलाई उच्च सम्मान प्रकट गरेको थियो । त्यतिबेला ट्रम्पले कालो कोट र रातो टाई लगाउनु भएको थियो भने जापानी सम्राटले उज्यालो निलो टाई लगाउनु भएको थियो..
Results 1619: You are at page 22 of 54